“ ပို၍ ခက်ခဲပြီးခက်ထန်သလား။ ပင်မညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည် ပိုမို၍ အကြမ်းဖက်လာပြီးကြည့်ရှုသူများသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုနှစ်သက်သလား” (2018) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
"ခက်နှင့်ခက်ခဲ၏ဝေဖန်မှု? အဓိကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပိုမိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်လာခြင်းနှင့် Do ကြည့်ရှုသူများသည်အကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာဦးစားပေး? "(2018) ဖြစ်ပါသည်
စိတ္တဇမှ Link ကို (အရာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလည်းဖြစ်ပါတယ်)
ဤစာတမ်း "(porn အတွက်ကျူးကျော်အပေါ် 2010 Ana Bridges လေ့လာမှုတန်ပြန်ဖို့အထင်မြင်မှားစေသော, တာဝန်မဲ့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအတွက်ကျူးကျော်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ update ကို"), အရာသည်လူကြိုက်အများဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်၏ 88% အမျိုးသမီးများအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော် featured ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်ဤလေ့လာမှုလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုများရှေးခယျြခဲ့သည့် Bridges လေ့လာမှုမှနှိုင်းယှဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်အသစ်များလေ့လာမှုကိုအတွက်ကျူးကျော်များ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမပြောပြနိုင် လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုများ 2008-2016 အကြား, ထိုသို့ပြုမှမလုပ်ပဲအဖြစ်။ အဘယ်ကြောင့်? လေ့လာမှုကြောင့်, သာကျော်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးဗီဒီယိုများအကဲဖြတ်ရန်ဘူး“ နမူနာနှင့်ဒေတာများကဏ္ this” မှကောက်နုတ်ချက်မှာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း -
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးနမူနာမဟာဗျူဟာတှငျကြှနျုပျတို့မျိုးစုံတိုင်းရင်းသားနှင့်လူမျိုးရေးအုပ်စုများထံမှအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကိုယ်စားပြုမှုတိုးမြှင့်ဖို့ရှာ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်နမူနာ technique ကိုအလုပ်အောက်ပါ PornHub အမျိုးအစားကနေအများဆုံးကြည့်ရှုဗီဒီယိုများကနဦးနမူနာအပါအဝင်: "အားလုံး" (70 ဗီဒီယိုများ), "မျိုးကွဲ" (25 ဗီဒီယိုများ), "Ebony" (52 ဗီဒီယိုများ), "ဂျပန် / အာရှ" (35 ဗီဒီယိုများ), "Latina" (19 ဗီဒီယိုများ), နှင့် "ဂေး" (25 ဗီဒီယိုများ)
အများဆုံးကတခြားအမျိုးအစားချန်လှပ်စဉ်နည်းလမ်းများ, (အမျိုးအစားရာနဲ့ချီဖြစ်ကောင်းရှိပါတယ်), ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားအားဖြင့်ဗီဒီယိုများရွေးချယ်ခြင်း သုတေသီအမြင်များအားဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုများရှေးခယျြမပြုခဲ့.
ဒါဟာဆိုးရွားရရှိသွားတဲ့။ က "ကဗီဒီယိုလူကြိုက်များအကဲဖြတ်ရန်မှီခို variable တွေကို" အပိုင်းအတွက်သုတေသီများအတော်လေးနှင့်အတူသူတို့အများအပြားဗီဒီယိုများအတွက်ဆက်ပြောသည်ပြောပါ နည်းသော အမြင်များ:
ကျွန်ုပ်တို့၏ပဏာမနမူနာကဒီအတိုင်းအတာအပေါ်အတော်လေးအနိမ့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဖို့ဦးဆောင်မှသာအများဆုံးအလွန်အမင်း watched ဗီဒီယိုများပါဝင်သည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်နည်းပါးလာအမြင်များကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဗီဒီယိုများတစ်ဦးအပိုဆောင်းကျပန်းနမူနာဆက်ပြောသည်။ နောက်ဆုံးနမူနာအရှင်အကြောင်းကို 11,000 အမြင်များကနေထက်ပိုမို 116 သန်းအမြင်များအထိ, ဗီဒီယိုတစ်ခုသိသိသာသာအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။
တိုတောင်း, ဒီစက္ကူလေးနက်ပညာသင်ဆုထက်ပိုတူသောကြိုးစားခဲ့ဝါဒဖြန့်လှပါတယ်။ အစောပိုင်းကခေတ်မှာတော့အဲဒီလိုညံ့, ဘက်လိုက်အလုပ်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ကူးမြောက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့၏အလုပ်ဘက်လိုက်နှင့် unscientific နှစ်ဦးစလုံးသည်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စှဲစက္ကူ၏စာရေးဆရာများစေသောရဲရင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်းဖြင့်ကျားကန်ဖြစ်ပါတယ် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကသတင်းထောက်များကို။ သုတေသီများကသူတို့၏အနုပညာထုတ်လုပ်မှုရလဒ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုသည်အကြမ်းဖက်မှုနည်းလာကြောင်း (ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိအကောင့်အားလုံးနီးပါးတွင်ပျံသန်းနေခြင်း) ကိုသက်သေပြရုံတင်မကဘဲထိုရလဒ်များက“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု” ကိုလည်းပါ ၀ င်သည်။ သူတို့တောင်းဆို, "ပျော့ပြောင်းပြီး" ဖြစ်လာနေသည်။
ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ပစ္စည်းများ (အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အခြားနည်းများ) အဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်ဟူသောအထောက်အထားများစွာရှိသည်။ ကြည့်ပါ လေ့လာရေး Porn အသုံးပြုသူများအတွက်စက်လှေကားကိုရှာပါ.
ဒုတိယအချက်မှာသူတို့၏သံသယဖြစ်ဖွယ်စာတမ်းပါပြောဆိုချက်မှန်သည်မှန်လျှင်၊ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အရာကမျှပြောပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စွဲလမ်းမှုသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောအခါအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြစ်လေးပုံတစ်ပုံအဖြစ် porn အသုံးပြုသူများအစွဲသတင်းပို့သူတို့ပိုမိုအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှမြင့်တက်လာခဲ့သည်ဖြစ်စေမ။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲတွင်ယခုပါဝင်သည် porn စွဲသူတွေအတွက်အသုံးပြုရနိုငျသောရောဂါ.
J ကိုလိင် Res ။ 2018 ဧပြီ 18: 1-13 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2018.1451476 ။
Shor အဘိဓါန် E ကို1, Seida K သည်1.
ဒါဟာများစွာကိုပညာရှင်များနှင့် pundits အကြားဘုံအယူအဆဖြစ်ပါသည် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသည်“ ပို၍ ခက်ခဲသည်။ အချို့သူများကအများအားဖြင့်အမျိုးသားများဖြစ်သောညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများသည်“ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း” သို့မလိုလားသူများဖြစ်လာကြကြောင်းအကြံပြုကြသည် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကြီးထွားလာသောဝယ်လိုအားနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအတွက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်စော်ကားသောပြုမူသောအမှုထောက်ပံ့ရေးအတွက်ရရှိလာတဲ့ပိုပြီးခက်ခဲအမာခံဖြစ်ကြောင်းဗီဒီယိုများ generate မှပျော်ရွှင်ကြသည်။ ကျနော်တို့လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း PornHub မှအပ်လုဒ်တင်ပြီး 269 လူကြိုက်များဗီဒီယိုများနမူနာအသုံးချဖို့ဖွငျ့ဤလက်ခံခဲ့သည်သည်ပညာကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ပိုများသောအထူးသကျနော်တို့နှစ်ခုဆက်စပ်တောင်းဆိုမှုများကိုစမ်းသပ်: ဗီဒီယိုများအတွက် (1) ရန်လိုအကြောင်းအရာမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့် (2) ကြည့်ရှုထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကြိုက်တတ်တဲ့, ကျူးကျော််ဗီဒီယိုများအတွက်အမြင်များ၏နံပါတ်နှင့်အဆင့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုသည်ဤရန်တွေ့ဘို့အဘယ်သူမျှမထောက်ခံကြောင်းကိုဆက်ကပ်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းရန်လိုအကြောင်းအရာအတွက်မဆိုတသမတ်တည်း uptick မတှေ့ဘဲ, တကယ်တော့, ပျမ်းမျှဗီဒီယိုအားယနေ့ကျူးကျော်ဖေါ်ပြခြင်းတိုတောင်းအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ ဒုတိယအနေရန်လိုပြုမူ်ဗီဒီယိုများနှစ်ဦးစလုံးလျော့နည်းအမြင်များနှင့်အမျိုးသမီးရှင်းလင်းစွာပျော်မွေ့လုပ်ဆောင်ဘယ်မှာဗီဒီယိုများကြိုက်တတ်တဲ့ကြည့်ရှုသူကလိုလိုလားလားအဆင့်ခံရဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိလက်ခံရရှိရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။